ကျွန်တော်လွတ်ကျခဲ့တဲ့မြို့တော်: အဓိပ္ပါယ်များကို ခံစားခြင်း
စာလုံးရေသိပ်မများလှပေမယ့် စဉ်းစားစရာအတွေးတွေ တသီကြီးပေးတတ်တဲ့ စာကြောင်းလေးတွေကို စာအုပ်ထဲမှာပဲ ဖြစ်စေ၊ လမ်းမှာသွားရင်းလာရင်းနဲ့ပဲ ဖြစ်စေ တွေ့လိုက်၊ ဖတ်လိုက်ရတဲ့အခါ ကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ အချိန်တွေမအားလပ်ကြလို့ ကျွန်တော့်လို ဆက်ပြီး မတွေးဖြစ်ကြတဲ့ သူတွေအတွက် အဲဒီအတွေးတွေအကြောင်းကို ပြန်ပြီး ဖောက်သည်ချချင်တဲ့စိတ်က တားမနိုင် ဆီးမရကို ပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်။ အားလုံးအတွက် တစ်ခုခုများ ပေးလိုက်နိုင်ရင် ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ စေတနာနဲ့ပါ။ အခုလည်း ဖတ်လိုက်ရတဲ့စာအုပ်တွေ၊ တွေ့လိုက် ကြားလိုက် မြင်လိုက်ရတဲ့ အချက်အလက်လေးတွေကနေတဆင့် စိတ်ထဲကိုရောက်လာတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာကြောင်းလေးတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်လှလှလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တွေးဖြစ်ခဲ့တာလေးတွေကို တင်ပြချင်ပါတယ်။
The word "Improvement" starts with "I".
ဒီစာကြောင်းလေးကိုဖတ်မိပြီး သေသေချာချာ တွေးမကြည့်တဲ့သူကတော့ အဲဒါ မင်းပြောမှလားလို့ စောဒကတက်ကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စကားလုံးတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ဆက်စပ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီစာကြောင်းရဲ့ အလှတရားက ပေါ်လာမှာပါ။ သူတကယ်တမ်း ဆိုလိုချင်တာက Improvement တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်ဖို့ 'I' ကိုယ်ကနေ စ'ရမယ် ဆိုတာလေးပါ။ ဟုတ်ပါတယ်... ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုဟာ ကိုယ်ကမစရင် ဘယ်တော့မှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တိုးတက်မှုလို့ ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း ငွေကြေးတိုးတက်မှုလား၊ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်း တိုးတက်မှုလား၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုလား၊ ဥာဏ်ပညာတိုးတက်မှုလား စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုတိုးတက်မှုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ အဲဒါတွေကို ရနိုင်ဖို့ ကိုယ်ကစရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့်တိုးတက်မှုလို့ ဆိုတဲ့နေရာမှာ အဲဒီကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ဆက်နွယ်နေမှုတွေအထိပါ စဉ်းစားဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ကိုယ်တိုးတက်မှုရှိမှ ကိုယ့်မိသားစု တိုးတက်မယ်။ ကိုယ့်မိသားစုတိုးတက်မှ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် တိုးတက်မယ်။ အဲဒီကနေတဆင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ ကိုယ့်လူမျိုးရဲ့ တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းအထိကိုပါ ဆက်စပ်တွေးခေါ်သွားဖို့ လိုပါတယ်။ တချို့ရှိပါတယ်။ အရမ်းတိုးတက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့တိုးတက်မှုတွေဟာ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်၊ လူသားတွေအတွက်၊ နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအတွက် ဆိုတာတွေအထိကို စီးဆင်းမလာတော့ဘဲ သူတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ သူတို့ရဲ့ မိသားစုမှာတင် ရပ်တန့် သွားတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုတိုးတက်မှုမျိုးကိုဆိုရင်တော့ တစ်ဘ၀စာတိုးတက်မှုလို့ပဲ အမည်တပ်ရမှာပါပဲ။ နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားရမှာက တိုးတက်မှုကိုရဖို့ ဘယ်လိုနည်းတွေကို ကျွန်တော်တို့ သုံးကြမလဲ။ ဘယ်လိုလမ်းတွေကနေ ကျွန်တော်တို့ သွားကြမလဲ ဆိုတာကိုပါ။ ဒီနေရာမှာ မှန်ဖို့ထက် မျှတဖို့က ပိုအရေးကြီးးတယ်ဆိုတဲ့ စာသားလေးကို ကျွန်တော် သုံးချင်ပါတယ်။ တချို့နေရာမှာ ငါ့ဖို့တစ်ခုတည်းကိုကြည့်ပြီး ဖြစ်သင့်မဖြစ်သင့် မစဉ်းစားတတ်ကြတဲ့သူတွေရဲ့ တိုးတက်မှုနှုန်းက ပိုမြန်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုအတွက် တွန်းလိုက် တိုက်လိုက်ရတဲ့သူတွေနဲ့ စတေးခံလိုက်ရတဲ့သူတွေ ရှိလာပြီဆိုရင် အဲဒီလို တိုးတက်မှုမျိုးကိုလည်း မသန့်စင်တဲ့တိုးတက်မှုလို့ အမည်တပ်ရဦးမှာပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံး မိမိကိုယ်ကို တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ အစဉ်တိုးတက်နေအောင် ကြိုးစားကြမယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုတွေကို ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လူသားတွေအားလုံးရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေအထိ စီးဆင်းသွားနိုင်အောင် ပြင်းထန်လွန်ကဲတဲ့ အတ္တစိတ်တွေကို ပယ်သတ်ကြမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်တိုးတက်မှု လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာ တရားမျှတမှုကို လက်ကိုင်ထားပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်စေအောင် သတိထား လျှောက်လှမ်းကြရင်း ရည်ရွယ်ချက်တူညီကြရင်လည်း လက်တွဲခေါ်သွားနိုင်အောင် ကြိုးစားကြမယ်။ အဲဒီလိုဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တိုးတက်နေမှုတွေကို ဘယ်သူမှ နာမည်ဆိုးတစ်ခုတပ်လို့ ရနိုင်တော့မယ် မထင်ပါဘူး။
We cannot spell "Success" without "U".
ဒီစာကြောင်းလေးကလည်း ခုနကစာကြောင်းလေးရဲ့ သဘောတရားအတိုင်းပါပဲ။ Success ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို 'U' ဆိုတဲ့ အက္ခရာ မပါဘဲနဲ့ ငါတို့ စာလုံးမပေါင်းနိုင်ဘူးတဲ့။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ internet, e-mail နဲ့ SMS (short message sending) တွေ ခေတ်စားလာချိန်မှာ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေကို အရှည်မရေးကြတော့ဘဲ အသံထွက်အတိုင်း အတိုကောက် ရေးသားသုံးနှုန်းလာကြတာလေးကို သိဖို့လိုလာပါတယ်။ ဥပမာ- 'You' ဆိုရင် 'U' လို့ တစ်လုံးတည်း ရေးလိုက်ပါတယ်။ 'See You' ဆိုရင်လည်း 'C u' လို့ နှစ်လုံးတည်း ရေးပါတယ်။ 'Please' ဆိုရင် 'Pls' 'Nevermind'ဆိုရင 'Nvm' စတဲ့ အတိုကောက် အသုံးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ အထက်ကစာကြောင်းလေးမှာလည်း 'U' ဆိုတဲ့ အက္ခရာကို 'You' 'သင်' လို့ မြင်နိုင်မှ စာကြောင်းလေးရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို သဘောပေါက်နိုင်မှာပါ။ သူအဓိကပြောချင်တာကတော့ သင် ('U') မရှိဘဲ အောင်မြင်မှု (Success) ဆိုတာကို ငါတို့ မရနိုင်ဘူးဆိုတာပါ။ ဒါကတော့ လူတစ်ယောက်ကို (Motivate) စိတ်ဓာတ်မြင့်မားလာအောင် လှုံ့ဆော်တဲ့ စာကြောင်းလေးတစ်ခုပါ။ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ အသုံးဝင်မှုတွေကို ရှင်းရှင်းကြီးမြင်လာစေပါတယ်။ ဘယ်လိုအသင်းအဖွဲ့မျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် လူတစ်ယောက်ချင်းစီဟာ ဒီအဖွဲ့အစည်းအတွင်း ကိုယ့်ရဲ့အရေးပါအရာရောက်မှုကို ခံစားနားလည်နေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်နေနိုင်ဖို့လည်း အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ နည်းလမ်းတွေမျိုးစုံသုံးပြီး ဆောင်ရွက်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင် ၀န်ထမ်းတွေကို လခတိုးပေးခြင်းနဲ့ ဆုကြေးငွေချီးမြှင့်ခြင်းတို့ဟာ စိတ်ဓာတ်မြင့်မားလာအောင် လှုံ့ဆော်ခြင်း (Motivation) ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါပဲ။ ဒါချည်းပဲလားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ထုတ်ဖော်ချီးကျူးတာ၊ သူ့ရဲ့အရေးပါမှုကို ပြောပြဆွေးနွေးတာ၊ နောက်ပြီး... အဲဒီသူရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ကြိုးစားမှုတွေကို အသိအမှတ်ပြု ဖော်ထုတ်ပေးတာမျိုးတွေဟာလည်း စိတ်ဓာတ်မြင့်မားအောင် လှုံ့ဆော်ခြင်း (Motivation) ရဲ့ အသွင်သဏ္ဍာန်တွေပါပဲ။ ကျွန်တော် ဘောလုံးအသင်းတစ်သင်းကို ဥပမာထားပြီး ပြောချင်ပါတယ်။ ဘောလုံးအသင်းတစ်သင်း အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ ကွင်းထဲမှာကစားနေတဲ့ ဘောလုံးသမား ၁၁ ယောက်အပြင် အရန်ခုံမှာထိုင်နေတဲ့ ကစားသမားတွေရော၊ မန်နေဂျာရောနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးရဲ့ စိတ်ထဲမှာ မိမိတို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်မှုတွေဟာ အသင်းရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကို ဘယ်လိုပုံဖော်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ သိရှိနားလည်နေမှ ဖြစ်မှာပါ။ ဘောလုံးသမားတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာ အဲဒီလို ယုံကြည်မှုရှိဖို့ အသင်းအုပ်ချုပ်သူ မန်နေဂျာမှာ တာဝန်ရှိသလို အခြားအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက ၀န်ထမ်းတွေအတွက်လည်း အုပ်ချုပ်ရေးဌာနရဲ့ အကြီးအကဲမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ အဲဒါမှလည်း အရန်လူတစ်ယောက်ဟာ ခုံတန်းကထလာပြီး ကွင်းထဲကို ပြေးအဆင်းမှာ သူ့ရဲ့အစွမ်းအစတွေဟာ မြင့်မားတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အတူ ပါလာမှာပါ။ အဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ အရန်လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ငါဟာအသင်းအတွက် ဘာမှလည်း အသုံးမ၀င်ပါလား၊ ငါဟာ လူပိုကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်နေပြီလား စတဲ့ စိတ်မျိုးတွေ လွှမ်းမိုးနေပြီဆိုရင်တော့ သူကွင်းထဲဆင်းတဲ့အခါတိုင်းမှာ သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံး အစွမ်းအစကို မြင်နိုင်ကြတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ တွဲလက်တွေ ခိုင်မြဲနိုင်ဖို့ တစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို တစ်ယောက်က အပြန်အလှန် လေးစားကြရင်း မင်းရဲ့ဖြစ်တည်မှုဟာ ငါတို့အတွက် အရေးပါတယ်ဆိုတဲ့ စကားကို များများပြောကြမယ်ဆိုရင် လူတွေရဲ့ အစွမ်းအစကို ဒီထက်ပိုပြီး ရနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
If you can analyse, the word "Impossible" will become I m possible.
မင်းကသာ သေသေချာချာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်မယ်ဆိုရင် မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ ငါဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့။ ဒီစာကြောင်းလေးကတော့ ရှင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ လူ့လောကကြီးထဲမှာ ကိုယ်ယုံကြည်ရာ၊ ရည်ရွယ်ရာ ပန်းတိုင်တစ်ခုစီကို အခြေအနေအရ မမျှော်လင့်တဲ့ လမ်းကြောင်းတွေကနေ လျှောက်ရတဲ့အခါမျိုးမှာ ကိုယ်မကျွမ်းကျင်တဲ့၊ ကိုယ်နဲ့ မသက်ဆိုင်လှတဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်ကြရတာမျိုးတွေနဲ့ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိစ္စတစ်ခုကို ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ဘာကြောင့် ပြောရတာလဲ... တကယ်တမ်းကျတော့ ဒီကိစ္စကို အသေးစိတ် ဂဃနဏ နားမလည်သေးလို့နဲ့ ဘယ်လိုလုပ်လို့ ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို လတ်တလော ခေါင်းထဲက မထုတ်နိုင်သေးလို့ ကျွန်တော်တို့ အဲဒီလို ပြောဖြစ်၊ ထင်ဖြစ်ကြတာပါ။ တကယ်တမ်း ဘ၀မှာ... ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ငါမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီး ရှောင်လွှဲသွားလို့မရတဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားတွေ ကျွန်တော်တို့လက်ထဲ ရောက်လာပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ အဲဒီတော့လည်း အထက်မှာပြောထားတဲ့ စာကြောင်းကလေးလို မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကို ငါလုပ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပြောင်းသွားအောင် သေသေချာချာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ လေ့လာကြရတော့မှာပါပဲ။ အချိန်တော့ပေးရမှာပေါ့။ ဒီစာကြောင်းလေးဟာ ဘ၀ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေအတွက် အရမ်းကို အခရာကျပါတယ်။ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး ကြုံတွေ့ရမယ့် 'Impossible' ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေကို ကျွန်တော်တို့ 'I m possible' ဆိုပြီး ဖြစ်သွားအောင် ပြောင်းနိုင်ပါမှ အောင်မြင်မှုဆိုတာကို လက်ဝယ်ပိုင်ပိုင် စွဲကိုင်နိုင်မှာပါ။ သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး အက်ဒီဆင်ကသာ 'Impossible' စကားလုံးကို 'I m possible' လို့ ပြောင်းလဲမစဉ်းစားခဲ့ဘဲ စောစောစီးစီး လက်လျှော့ခဲ့ရင် လျှပ်စစ်မီးဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ မြင်ခွင့်ရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လောက်ပဲ ခက်ခဲတဲ့အရာဖြစ်ပါစေ၊ ဘယ်လောက်ပဲ စွမ်းအင်တွေ လိုအပ်တဲ့အရာ ဖြစ်ပါစေ၊ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာ ဆိုတဲ့ စကားကို မပြောဘဲ ငါလုပ်ရင်ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့စိတ်မျိုး ပြောင်းမွေးပြီး ကြိုးစားရင်း Impossible ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘ၀တွေထဲကနေ မောင်းထုတ်ပစ်ကြရအောင်လေ။
I4A, A4I
ဒီစာကြောင်းလေးကိုတော့ မြင်ဖူးကြတဲ့သူ တော်တော်များမှာ ဖြစ်သလို အဓိပ္ပါယ်ကိုလည်း နားလည်ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ရောမဂဏန်း I ၊ သချာင်္ဂဏန်း4နဲ့ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ A တို့ကို သုံးပြီး စာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းကို အတိုချုံ့ထားတာပါ။ ရောမဂဏန်း I ကတော့ One ကို ဆိုလိုတာပါ။4ကတော့ For အတွက် သုံးတာပါ။ For You လို့ ပြောချင်ရင် 4U လို့ အတိုကောက် ရေးတတ်ကြပါတယ်။ A ကတော့ All ကို ဆိုလိုချင်တာပါ။ အဲဒီတော့ ဒီစာကြောင်းလေးကို အရှည်ဖြန့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ...One for All , All for One ဆိုပြီး ဖြစ်လာပါတယ်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ဟာ အများအတွက်ရပ်တည်ရင် အဲဒီအများစုဟာလည်း အဲဒီတစ်ဦးတစ်ယောက်ဘက်မှာ ရှိတယ်လို့ ပြောတာပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေပီပီ မေတ္တာတရားနဲ့ စေတနာတို့ရဲ့ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကို ယုံကြည်မယ်ဆိုရင် ဒီစာကြောင်းလေးရဲ့ အလှတရားကိုလည်း ခံစားနားလည်လို့ ရကြပါလိမ့်မယ်။ မိမိရဲ့ ဘ၀တစ်ခုလုံးကို အားလုံးအတွက် ပေးအပ်ထားနိုင်ဖို့ဆိုတာ တကယ်ကို မလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စပါ။ ပုထုဇဉ်တွေပီပီ အတ္တနဲ့ယှဉ်တဲ့ အလိုဆန္ဒတွေဆိုတာ လူတိုင်းမှာ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူလူချင်း ကိုယ်ချင်းစာတတ်တဲ့၊ သူတစ်ပါးရဲ့ဒုက္ခကို မျှဝေခံစားပေးချင်စိတ်ရှိတဲ့၊ ဘ၀ရဲ့ဒဏ်တွေကို အလူးအလဲ ခံနေကြရတဲ့၊ ချို့တဲ့နွမ်းပါးသူတို့ရဲ့ မပြည့်စုံမှုတွေကို ဥပက္ခာမပြုနိုင်ကြတဲ့ အချို့အချို့သောသူတွေဟာ အတ္တဆန္ဒတွေကို ချိုးနှိမ်ဘေးချထားပြီး ဘ၀တစ်ခုလုံးကို ပေးဆပ်ခြင်းသက်သက်အတွက်ပဲ ရပ်တည်ရှေ့ဆက်ကြဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တတ်ကြပါတယ်။ မေတ္တာတရားဟာ အပြန်အလှန် ရှိပါတယ်။ ကိုယ်က အဲဒီလို ဘာအကျိုးကိုမှ မမျှော်ကိုးပဲ သူတစ်ပါးကို ကူညီရုံသက်သက်၊ ပေးဆပ်ရုံသက်သက်အတွက်ပဲ ရပ်တည်မယ်ဆိုရင် အဲဒီသူတွေရဲ့ မေတ္တာရောင်ပြန်ကိုတော့ ပြန်ရမှာ မလွဲမသွေပါပဲ။ တကယ်တမ်းကျတော့လည်း အဲဒီလိုလူမျိုးတစ်ယောက်အတွက်ကတော့ ဘာတွေပြန်ရတယ် မရဘူး ဆိုတာက အဓိကမကျပါဘူး။ သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကြောင့်၊ သူ့ရဲ့ကူညီဖေးမမှုကြောင့် အခြားတစ်ယောက်ယောက် အဆင်ပြေသွားပြီး ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ပဲ သူ့ရဲ့ရင်ထဲက ကြည်နူးမှုက သူ့ကိုပြန်ပြီး ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုရစေမှာပါ။ အချို့တွေကျတော့လည်း အတ္တနဲ့ပရအတွက်ကို မျှမျှတတ လုပ်ဆောင်ကြရင်း ဘ၀ကို ကြည်ကြည်နူးနူးနဲ့ ကုန်လွန်ဖြတ်သန်းသွားသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တကယ်တမ်းကျတော့ ရယူပိုင်ဆိုင်မှုတွေကပေးတဲ့ ကျေနပ်မှုဟာ တစ်ချိန်ချိန်မှာ စိတ်ကိုပြန်ပြီး ပူလောင်စေပါတယ်။ စွန့်ကျဲပေးကမ်းမှုတွေကပေးတဲ့ ကြည်နူးငြိမ်းချမ်းမှုတွေကသာ နှလုံးသားကို အမှန်တကယ် အေးမြစေတာပါ။ သူလဲလူ ငါလဲလူပဲ ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ လူသားအားလုံးအပေါ်မှာ မိသားစုစိတ်သာ ထားနိုင်ကြမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်မိသားစုဝင်တွေပျော်ရင် ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ ကျေနပ်နေသလို လူတိုင်းရဲ့ ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်မှုတွေတိုင်းအတွက် ကိုယ်ကပါ ကြည်နူးမှုတစ်ခုကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အထက်ကစာကြောင်းလေးကို ဒီလိုအဓိပ္ပါယ်ပြန်ကြည့်ရင် ပိုပြီးတော့ လေးနက်ပြီး၊ ပိုပြီးလှသွားလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဟာ လူသားအားလုံးအတွက်ဆိုပြီး ရပ်တည်ရှေ့ဆက်ရင် အားလုံးရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေဟာလည်း ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေပဲ၊ အားလုံးရဲ့ ကြည်နူးမှုဟာလည်း ကိုယ့်ရဲ့ကြည်နူးမှုပဲ၊ အားလုံးရဲ့ အပြုံးတွေဟာလည်း ကိုယ့်ကို အကောင်းဆုံးပြန်ပေးနေတဲ့ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုတွေပါပဲ...လို့...။
ရေးသားသူ - NayPhoneLatt at Sunday, July 29, 2007
အချိန်တွေမအားလပ်ကြလို့ သူ့လို ဆက်ပြီး မတွေးဖြစ်ကြတဲ့ သူတွေအတွက် အဲဒီအတွေးတွေအကြောင်းကို ပြန်ပြီး ဖောက်သည်ချပေးတဲ့ မြို့ စားကြီးရဲ့ စေတနာကို သိုင်းကြူးပါ။
P.S: One for All , All for One အရှည်မဖြန့်ခင် ခေါင်းစဉ်က ဘာလဲ ပျောက်နေသလားလို့
ကျွန်တော် မအားလို့ စာမရေးဖြစ်ကတည်းက ဖတ်သမျှ Post တွေထဲမှာ ဒီ Post ကတော့ အလွန်အထူးကောင်းလှပါတယ်ဗျာ။ ဒီလိုစာမျိုးတွေ Blog အားလုံးမှာသာ ဖတ်ရရင် ရှယ်ပဲ။ ထမင်းမစားတော့ဘူး။ စာပဲဖတ်မယ်လေ။
ကောင်းလွန်းလို့ ကွန်နက်ရှင်မကောင်းတဲ့ကြားက ကွန်မန့်ဝင်ပွတ်လိုက်တယ်ဗျာ.. လွှတ်ကောင်း..း)
Above comments are all i want to say :P 5/5
ko nay phone latt letter ko read ya tar I taw taw tha baw kya tal byar
read thu arr lone atwet atu u sa yar lal phyit par tal
next mhar lal di htet good tat letter myar ko write naing par say lo sanda pyu par tal
lwan ye thu
ကျွန်တော်နှင့် ငရဲကြီး ၁၂ထပ် ...
ဗိုလ်ချုပ်ရေ ... ကျွန်တော်တို့ တာဝန်မကျေသေးဘူး ......
ဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲ . . .(၂)
ဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲ . . .